Baarlamaanka Puntland oo dood ka yeeshay lifaaqa xuliska Baarlamaanka ( Dhegayso) – Radio Daljir
Baarlamaanka Puntland oo dood ka yeeshay lifaaqa xuliska Baarlamaanka ( Dhegayso)
Luulyo 23, 2013 4:32 b 0
Garoowe, July 23-2013, Mudanayaasha Baarlamaana ee Puntland oo maanta kulan ku yeeshay aqalka Baarlamaanka ayaa si weyn uga dooday lifaaq ka hadlaya soo xulista Xildhibaanadda bedeli doona kuwa hada jira.
Lifaaqan oo uu soo diyaariyey guddiga shuruucda ee baarlamaanka Puntland ayaa ka hadlaya Xildhibaanada cusub ee lagu bedeli doono kuwa haadan wakhtigoodu dhamaadka yahay.
Gudiga soo diyaariyey Warqadan ayaa sheegay in Xildhibaanadda cuusub ay ku imaan doonaan hab beeleedka ay hore Puntland wax ugu qaybsan jirtey.
Xildhibaanada barlamaanka ayaa kadib gudo galay dood ay ku yeelanayeen warqadaasi Lifaaqa ah waxay siyaabo kala duwan uga hadleen Lifaaqan.
Gudoomiyaha barlamaanka Puntland C/Rashiid Maxamed Xirsi ayaa dooda kadib ku dhawaaqay in maalinta berito la isugoo laabanayo go?aan ka gaarida Lifaaqaan.
Lifaaqan ay soo gudbiyeen gudiga shuruucda ee Baarlamaanka Puntland ayaa doorashooyinka soo socda ee Puntland ka dhigaysa kuwo loo maro nidaamkii qabiilka oo Puntland kasoo gudubtey balse hada lagu celiyey.
Khasaare ka dhashay miino ka qaraxday wadajir iyo Dowlada oo sheegtay in ay dhinteen ragii waday
Baahin: Isniin, 23 July 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Macamed C Cali (Kooshin) ~ Daljir ~ Garowe